मिस वल्डमा3प्रश्नको जवाफ शृंखलाले यस्तो दिइन (भिडियोमा हेर्नुस) - Maxon Khabar
Home / News / मिस वल्डमा3प्रश्नको जवाफ शृंखलाले यस्तो दिइन (भिडियोमा हेर्नुस)
मिस वल्डमा3प्रश्नको जवाफ शृंखलाले यस्तो दिइन (भिडियोमा हेर्नुस)
जनबादी गणतन्त्र चीनको सान्यामा चलिरहेको मिस वर्ल्ड–२०१८ मा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै स मिस नेपाल २०१८ बिजेता शृंखला खतिवडा सेमिफाइनल मा पुगेकी छन् ।
यस् प्रतियोगितामा विश्वाका १२१ देशका सुन्दरीको शहभागीता रहेको थियो । मिस वल्डले भर्खरै हेड टु हेड च्यालेन्ज अन्तर्गत समुह १३ को भिडियो युट्युबमा रिलिज गरेको छ । समुह १३ मा हाम्रो देश नेपालसँगै बोस्निया हर्जगोभिना, गुवाम, लग्जम्वर्ग, माल्डोभा र अर्जेन्टिना लगायत छ वटा देश परेका छन ।
उनलाई सोधिएको प्रथम प्रश्न थियो ‘तपाईं आफुँलाई किन सामान्य बच्चा सम्झिनु हुन्छ ? शृंखलाले जवाफ दिदै भनिन ‘म कुनै प्रकृतिक ट्यालेन्ट होईन, म जन्मजात नै विलक्षण प्रतिभा भएर जन्मेकी केटि होईन तर मान्छेले कडा परिश्रम गर्यो, काम प्रति ध्यान भयो भने भने त्यस्ता विलक्षणहरुलाई पनि हराउन सकिन्छ । म त्यस्ता बच्चाहरुमा बिलोंग गर्छु जुन आफ्नो कडा मेहनतले केहि काम गर्न सक्छन । त्यसैले आफुँलाई एभरेज किड भनेकी हुँ ।
शृंखलालाई सोधिएको नम्बर २ प्रश्न ‘त्यस्ता बच्चाका बाबुआमालाई तपाई क्स्तो सुझाब दिनुहुन्छ ? जवाफ थियो ‘हरेक बुबा-आमालाई यो कुरा थाहा हुन जरुरी छ कि, बच्चाहरुको कुनै कुरामा लगाब छ भने त्यहिँ कुरामा उसलाई प्रोत्सान । उनलाई अन्तिम प्रश्न थियो नेपालको मुख्य समस्या के हो ? र यसको समाधान को उपाय के हो ? शृंखलाको जवाफ थियो " वेरोजगार" उनले थपिन नेपालको दक्ष जनशक्ति विदेशीनु पर्ने नै नेपालको मुख्य समस्या हो ।
देश भित्र नै रोजागारीको बातावरण बनाउन सक्नु यसको सामाधान हो । हामीसँग इतिहाँस , संस्कृति, प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण मनोरम देश छ । टुरिज्मको विकास नै देशको उन्नती प्रगतिको लागी सर्बोत्तम विकल्प हो । । हामी संसारलाई मिठो मुस्कान दिन सक्छौँ अतिथि देव भव: हाम्रो मुक्य मुलमन्त्र हो ।